I-Canyon Cottage "Indlela yokubalekela ethokomele"
ICanyon Cottage iyinqaba yami. Ibekwe emuva ukusuka emgwaqeni endaweni eyimfihlo futhi ethulile elungele Abantu Abadala Kuphela. Uhambo olufushane nje oluya ehlathini lemvula elihle kakhulu elisohlwini lwe-World Heritage lapho uzothola khona izimpophoma ezigelezayo nezitshalo nezilwane ezinhle...Indawo ekhuthazwayo , ukuze uphumule futhi uphumule .....Ibhizinisi selilungile nokwabelwana ngalo njengo abantu abanengqondo. Ekhaya kude nasekhaya...
Ikotishi lihlome ngokuphelele njengekhaya lami. Ngiyajabula ngawe ukuthi usebenzise ikhishi ngokugcwele. Uzothola itiye, ikhofi (pods), uju olushukela kanye nobisi lwempilo ende.
Kukhona amanzi ethangi ahlungiwe, ama-dvd, ama-cd kanye noxhumo lwe-usb.
Singakhohlwa umgodi womlilo othokomele, i-bbq kanye nohhavini wekamu kanye nokutholakala kwamapulangwe.
Ngiyayithanda imvelo (ngaphandle) ngakho-ke qiniseka ukuthi leli khaya lihlolwe ngokuphelele ngakho-ke azikho izinto ezikhasayo...
Izinsuku zasebusika kanye nobusuku kuthokomele uma kunesimo sezulu esibuyela emuva noma ukushisisa igesi .. Ukulala ebusuku kuvame ukubanda unyaka wonke.
4.96(120 okushiwo abanye)
Indawo enokuthula, ethule futhi ezolile kakhulu phezu kweGondwana Rainforest. Ipholile unyaka wonke ngokufika ku-10 degrees. Uma uthanda ukubuka izinyoni (ama-binoculars anikeziwe), ukuhamba ngezinyawo noma ufuna i-Flora, Izilwane Ezifuywayo noma Isikhunta lena indawo yakho noma nje ukuze uphumule futhi uphumule. Ubusika bupholile ngakho izingubo ezifudumele ezidingekayo kanye namajazi emvula phakathi nezinyanga zasehlobo nakuba ngiwanikeza lezi zamuva.
Ngokuvamile ngihlala estudiyo esizeni kodwa ngithanda ubumfihlo bami (njengezivakashi ) kodwa ngingathintwa njalo kuselula yami nganoma yisiphi isikhathi .